Ifektri ejwayelekile - Abenzi baseChina abajwayelekile, abahlinzeki
GPS Tracker / Jikelele / GT-G01
Le modeli ye-smart GPS tracker isuselwa kubuchwepheshe besikhundla se-GPS + AGPS, ingashesha kakhulu futhi ithole ngokunembile isikhundla emhlabeni jikelele. It suit for imoto, asebekhulile, ingane, inja, imithwalo njll .. It has geo-kocingo setting umsebenzi, uyobe uqaphele lapho aphume endaweni setting.
Inebhethri elikhulu kakhulu futhi ingaba eceleni kwezinyanga ezi-4. Inomsebenzi oqinile ongangenwa ngamanzi, ingangena emanzini, ngakho-ke awekho amanzi okukhathazeka nemvula ngenkathi kufakwa isicelo sezimoto nezinja.
Futhi le modeli inezinzuzo ezithile, i-alamu esheshayo, i-alamu yamandla aphansi, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuvala i-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, ukonga amandla nezindleko ze-GPRS. Ungumsizi omuhle wokulwa nokulahlekelwa.
GPS Tracker / Jikelele / GT-G02
Le modeli smart GPS tracker isekelwa yi-GPS + AGPS position tech, ibeka ngokushesha okukhulu futhi ngokunembile. Ifanela imoto, asebekhulile, ingane, inja, imithwalo njll. Itholakalela ukubekwa kwe-geo-fence nokuxwayisa ngenkathi iphuma endaweni yokubeka.
Kunesikhathi sokulinda izinsuku eziyi-12 futhi kunezinzuzo eziningi, i-alamu esheshayo, i-alamu yamandla aphansi, i-alamu yokuhamba, ukungena / ukuphuma kwe-alamu ye-Geo-fence, i-alamu yokudlidliza, i-alamu yokulwa nokudilizwa, i-alamu yokulwa nokushayisana, gcina amandla nezindleko ze-GPRS. Ungumsizi omuhle wokulwa nokulahlekelwa. Futhi inomsebenzi oqinile ongangenwa manzi, ungangena emanzini, ngakho-ke akukho manzi okukhathazeka nemvula ngenkathi isetshenziselwa imoto nezinja.
Khulisa ukukhanya, Isitshalo sikhule ukukhanya, Khulisa i-Lightin, Ukukhanya kwesitshalo, Isitshalo Sikhule Ngokukhanya, Isitshalo Sikhule Ukukhanya,